မျှမျှတတပေါ့ (မျှမျှတတမရှိသောအစ္စလမ်ဘာသာ) | မျိုးမြန်မာ
Posted in: အစ္စလမ်ဘာသာ.	Tagged: မျှမျှတတ, အစ္စလမ်, Islam.	Leaveacomment
မွတ်ဆလင်တို့ ဧ။် အောက်တန်းကျ ယုတ်မာ ပက်စက်စွာ မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရသော ကမ္ဘာ့ ဂုဏ်ဆောင် ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဧ။် အထွတ် အမြတ် နာလန္ဒာ ဗုဒ္ဓ တက္ကသိုလ် ကြီး ၊ ယခုအခါ အုတ်ကျိုးအုတ်ပဲ့ များသာ ကျန်တော့သည်။…….( ပြန်လည် ခုခံခြင်းမရှိသော )ဗုဒ္ဓရဟန်းသံဃာတော်များကို မွတ်ဆလင်တွေက ယုတ်မာ ပက်စက်စွာ အရှင်လတ်လတ် လည်လှီးခေါင်းဖြတ် သတ်ခဲ့ကြသည်။ ဗုဒ္ဓရဟန်းသံဃာတော်များကို မွတ်ဆလင်တွေက ယုတ်မာ ပက်စက်စွာ အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့ သတ်ခဲ့ကြသည်။ အဖိုးမဖြတ်နိုင်သည့် ဗုဒ္ဓ ကျမ်းဂန်များ ကို မွတ်ဆလင်များ က ယုတ်မာပက်စက်စွာမီးတင်ရှို့ ခဲ့ကြသည်။ )
နှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ ချီပြီးတည်တံ့ လာခဲ့သော ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီး ကို မွတ်ဆလင်တို့ သည် ( ကိုရမ်ကျမ်းစာ အရ) ယုတ်မာ ရိုင်းစိုင်းစွာ ဒိုင်းနမိုက်ဖြင့် ဖေါက်ခွဲ ဖျက်ဆီးခဲ့ကြသည်။ မွတ်ဆလင်တို့ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းများကို ဖေါက်ခွဲဖျက်ဆီးထား ပုံ ။ ခရစ်ယာန်တို အထွတ်အမြတ် ထားသော လက်ဝါးကတ်တိုင်ကို မွတ်ဆလင်တို့ ခြေထောက်နဲ့ နင်းပြီးဖျက်ဆီးနေပုံ။ ဟိန္ဒူ ဘာသာတို့အထွတ်အမြတ်ထားသော Lord Rama ( ရာမဘုရား) မွေး ဖွားရာ Ayodhya ဟိန္ဒူ ဘာသာရေး အမြင့်မြတ်ဆုံးသောနေရာတွင်ရှိသော ဟိန္ဒူ ဘုရားကျောင်းကိုမွတ်ဆလင်တို့ ယုတ်မာ စော်ကားပက်စက်စွာ ဖျက်ဆီးပြီးထိုနေရာတည့်တည့် တွင် မိုက်ရိုင်းစောက်ကားစွာ ဗလီကြီး ဆောက်ထားပုံ။ ( Byzantine )တူရကီနိုင်ငံကို မွတ်ဆလင်တို့ကျူးကျော်သတ်ဖြတ်ပြီး နောက် Hagia Sofia ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီး ကို ဖျက်ဆီးပြီး ယုတ်မာပက်စက်စွာ ဗလီလုပ်ခဲ့သည်။(နောင်တစ်ချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ကြီးကို ဖေါက်ခွဲဖျက်ဆီးပြီး ထို ရွှေတိဂုံ ကုန်းတော် ပေါ် တွင် ဗလီကြီးဆောက်ထားမည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်မွတ်ဆလင်ဦးရေများလာပါက အမှန်ပင်ဖြစ်လိမ့်မည်) ဂျူးလူမျိုးတို့ ဧ။် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အမြင့်မြတ်ဆုံး အထွတ်အမြတ် နေရာ ဂျေရုဆလင် မြို့ ရှိ Temple Mount နေရာတွင် မွတ်ဆလင်တို့ ကျူးကျော်သတ်ဖြတ်ပြီး နောက် ယုတ်မာပက်စက်စွာ ဗလီကြီးဆောက်ထားပုံ။ (နောင်တစ်ချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ကြီးကို ဖေါက်ခွဲဖျက်ဆီးပြီး ထို ရွှေတိဂုံ ကုန်းတော် ပေါ် တွင် ဗလီကြီးဆောက်ထား မည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်မွတ်ဆလင်ဦးရေများလာပါက အမှန်ပင်ဖြစ်လိမ့်မည်) အင်ဒိုနီးရှားတွင် မွတ်ဆလင် များ ဗုဒ်ဓ ဆင်းတုတော်ကို ကြိုးဆွဲချသေ ဒဏ်ပေးသလို လုပ်ကာ ယုတ်မာ မိုက်ရိုင်းစော်ကားထားပုံ နှင့် ဗုဒ်ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ယုတ်မာ ရိုင်းစိုင်းစွာ ဖျက်ဆီး မီးရှို့ထားပုံ ။
ဖေါ်ပြပါပုံများမှာ နမူနာအနေဖြင့်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ လက်တွေ့တွင် ဟိန်ဒူ ဘုရားကျောင်းများ ထောင် နဲ့ ချီပြီး၊ဗုဒ္ဓ ဘုရားကျောင်းများ ထောင် နဲ့ ချီပြီး၊ဂျူး ၊ ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ ထောင် နဲ့ ချီပြီး မွတ်ဆလင်များဧ။် အောက်တန်းကျ ယုတ်မာစွာဖျက်ဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။
အဲဒီလို သာ သူများဘာသာတွေကို ရစရာ မရှိအောင်ဖျက်ဆီးထားပေမဲ့ မွတ်ဆလင်တွေဟာ သူတို့ ရဲ့ ALLAH ခေါ် (vagina)မိန်းမအင်္ဂါ ဘုရား ကျောက်တုံး ရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့(vagina)မိန်းမအင်္ဂါဘုရားရှိရာ ဆော်ဒီက မက်ကာ မြို့ကို ကျတော့ဘာသာခြားတစ်ယောက် မှ အ၀င်မခံဘူး။ ၀င်တာနဲ့တရားဝင်ခေါင်း ခေါင်းဖြတ်သတ်ခွင့်ရှိတဲ့ အပြင်
ဆော်ဒီ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ တခြားသောဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဘုန်းကြီိးကျောင်းတို့ ၊ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတို့ ၊ ဟိန်ဒူ ဘုရားကျောင်းတို့ကိုလုံးဝ(လုံးဝ) ပေးမဆောက်ဘူးခင်ဗျ၊
မြင့်မြတ်တဲ့(vagina)မိန်းမအင်္ဂါ ဘုရားအာလာ တည်ရှိရာ နေရာမှာ တခြား သော ဘာသာတွေနဲ့ ယုတ်ညံ့ သွားးမှာစိုးလို့ တဲ့။ တော်တော်သိတတ် တယ်နော်။
အမှန်က ..ဆူးလေ ဗလီဆိုတာရှိရင် ဆော်ဒီ မက်ကာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဆိုတာရှိ ရမယ်လေ။
ဟိန္ဒူ ဘာသာဝင်တွေ အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ ရာမဘုရား God Siva မွေးဖွားရာ ဟိန္ဒူ ဘာသာရေးအထွတ်အမြတ်နေရာ Ayodhya မှာ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ ဗလီကြီးတွေဆောက်ထားရင် မက်ကာမြို့ ဟိန္ဒူ ဘုရားကျောင်းဆိုတာလဲရှိသင့်တာပေါ့။
ခရစ်ယာန်တွေ အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ ဂျေရုဆလင်မြို့နဲ့ခရစ်တ်ာဖွားမြင်ရာ ဗက်လင်မြို့မှာ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ ဗလီကြီးတွေဆောက်ထားရင်
ဆော်ဒီ မက်ကာမြို့ မှာလည်း Church of Mecca ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဆိုတာရှိရမှာပေါ့။
ဂျူးဘာသာဝင်တွေအထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ ဂျေရုဆလင်မြို့မှာ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ ဗလီကြီးတွေဆောက်ထားရင် ဆော်ဒီ မက်ကာမြို့ မှာလည်း
Synagogue of Mecca ဆိုတာရှိသင့်တာပေါ့။
ဒါပဲလေ။ရှင်းရှင်းလေး။ အစ္စလာမ် မွတ်ဆလင်တွေ ဟာ အခြားဘာသာတွေအပေါ် ဘယ်လောက်တောင်အောက်တန်းကျ မိုက်ရိုင်းသလဲဆိုတာ…။
အမှန် က ရန်ကုန်မှာ ဗလီတစ်လုံး ထပ်ဆောက်ချင်ရင် ဆော်ဒီ က မက်ကာ မြို့မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းပေးဆောက်ရမယ်။
ပဲရစ်မြို့မှာ ဗလီ အခု ၂၀ ဆောက် ချင်ရင် ဆော်ဒီ က မက်ကာ နဲ့မက်ဒီနာ မြို့ မှာလည်း ခရစ်ယာန် ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ၂၀ ပေးဆောက်ရမယ်။
ဒါ ပဲလေ .။ ရှင်းရှင်းလေး…..။ မျှမျှတတပေါ့။
အိန္ဒိယ ဟိန္ဒူ ဘာသာဝင်တွေရဲ့ နိုင်ငံ မှာ ဗလီ အလုံး ၁၀၀ ဆောက် ရင် ဆော်ဒီ က မက်ကာ နဲ့မက်ဒီနာမြို့မှာ ဟိန္ဒူ ဘုရားကျောင်း အခု ၁၀၀ ပေးဆောက်ရမယ်။
သူတို့အစ္စလာမ် မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ အထွတ်အမြတ်နေရာ တွေဖြစ်တဲ့ စောက်ဖုတ်ဘုရားအာလာ Allah ကျိမ်းဝပ်တော်မူရာ မက်ကာ မြို့နဲ့ 
လူသတ်သမား၊ ဓားပြ၊ တဏှာရူး မုဒိန်းကောင် မိုဟာမက်ရဲ့ သင်္ခ်ျိုင်း ( မက်ဒီနာမြို့) မှာ သူများဘာသာတွေ ရဲ့ ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေ
ပေးမဆောက်ရင် သူတပါးဘာသာတွေရဲ့ဘာသာရေးအထွတ်အမြတ်နေရာတွေ မှာ အော့နလုံးနာစရာ ဗလီကြီးတွေလိုက်မဆောက်နဲ့ လေ။
ဒီတော့ကာ သူတို့အစ္စလာမ် မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ အထွတ်အမြတ်နေရာ တွေဖြစ်တဲ့ မက်ကာ နဲ့မက်ဒီနာမြို့တွေမှာ Religious Freedom အရ
ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ဟိန္ဒူ ဘုရားကျောင်း၊ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း တွေပေးဆောက်မလား မေးကြည့်။
ပေးမဆောက်ဘူး။ ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ၊ ဟိန္ဒူ ၊ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင် နိုင်ငံတွေအားလုံး သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအသီးသီးမှာ မည်သည့် ဗလီ ကို မှ ပေးမဆောက်ပါနဲ့ ။ Ban Mosques လုပ်ပါ။ Ban Mosque လုပ်ပစ်ပါ။
ဗလီဆောက်ချင်ရင် သူတို့ အစ္စလာမ် မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ အထွတ်အမြတ်နေရာ တွေဖြစ်တဲ့ မက်ကာ နဲ့မက်ဒီနာမြို့တွေမှာ
တခြားဘာသာရေးအဆောက်အဦး တွေပေးဆောက်မှ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ဗလီပေးဆောက် ပါ။ Exchange လုပ်ပါ။
သဘောပေါက်ပါ ။ ဥာဏ်မတိမ် ပါနဲ့ ။ အူလည်လည် စဉ်းစားမနေပါနဲ့ ။ ရှင်းရှင်းလေး။ ၅၀း၅၀ ပဲ။
အစ္စလာမ် မွတ်ဆလင်တွေဟာ စောက်ကျင့် သိပ်ယုတ်ပါတယ်။ အခြားဘာသာတွေ အပေါ် အောက်တန်းကျ မိုက်ရိုင်းထားပြီး သူတို့အစ္စလာမ် ဘာသာကိုကျတော့ ဆတ်ဆတ်ထိမခံနိုင်ပါဘူး။
ဒီလိုပါပဲ။ အခြားနိုင်ငံတွေမှာ Native မျိုးနွယ် မိန်းမတွေကို ရသလောက်ယူပြီး အစ္စလာမ် အတွင်းသွတ်သွင်း ပြီး သူတို့မွတ်ဆလင်မတွေကိုကျတော့ တခြားဘာသာဝင် ကောင်လေးတွေက စားသွားမှာ သေအောင် ကြောက်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မွတ်ဆလင်ကောင်တွေက တော့် ဗုဒ္ဓဘာသာ မိန်းကလေးတွေကို ရသလောက်ယူပြီး ….မွတ်ဆလင်မတွေကိုကျတော့ အိမ်တွင်းပုန်း လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ အင်မတန်မှ စောက်ကျင့် ယုတ်တဲ့ အစ္စလာမ် ကုလားဒိန် မွတ်ဆလင်ခွေးမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။
Credit : Islam Suck
Admin : Myo Myanmar
← Islam is not justaReligion, Islam is way more thanaReligion, Islam is Imperialistic Ideology
အမြန် share ပေးကြပါခင်ဗျာ →